उहिलेको एसएलसीमा आफू फेल हुँदा छक्क परेँ– भास्करराज राजकर्णिकार | नुवागी
मैले आफ्नो व्यावसायिक ‘करियर’को सुरुवात ‘प्रोफेसनल विज्ञापन एजेन्सी’ बाट गरेँ। त्यसपछि नेपालमा सम्भवतः पहिलो ‘प्रोफेसनल एक्जिबिसन’मा पनि गरेँ। एभिन्युज टेलिभिजनको जन्म धेरै पछि भएको हो । अब ‘कम्युनिकेसन’बाट बिस्तारै बाहिर जानुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ । कम्युनिकेसनबाहेक शिक्षा क्षेत्रमा पनि थोरै लगानी गरेको छु । मेरो इच्छा चाहिँ ‘एचआर डेभेलपमेन्टमा ट्रेनिङ एन्ड एक्सपोजर्स’मा छ । नेपालमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मिडिया स्कुलको कल्पना गरेको छु, जसले डिग्री मात्र दिने नभएर ‘एक्स्पोजर’ दिनुका साथै ‘प्रोफेसनल मिडिया स्किल’ र ‘ट्रेनिङ’ पनि दिनेछ । यो सोच मात्र हो अहिलेका लागि ।
म नयाँ शिक्षा लागू भएको बेला स्कुल भर्ना भएँ ०२८ सालमा । पछि ‘ल्याब स्कुल’ मा पढ्न थालियो । त्यहाँ ‘भोकेसनल’मा कुखुरा पाल्न पथ्र्यो । विशेष संगीत कक्षा हुन्थ्यो । खेलमा पनि हामी राम्रा थियौँ । गाडी चलाउन आउँथ्यो । अनि भन्थ्यौँ– केही नभए ट्याक्सी चलाएर जीवन धान्न सक्छौँ । कोही म्युजिकमा त कोही खेलबाट जीवन चलाउन सक्ने अवस्थामा थियौँ । हामी जे गर्थ्यौ, त्यो बाँच्न सक्ने आधार हुन्थ्यो । शिक्षा भनेको आफूले आर्जन गर्न सक्ने, आफूलाई बचाउन सक्ने हुनुपर्छ । पिएचडी गरे पनि कहीँ केही गर्न नसक्ने शिक्षाको के अर्थ ? स्कुल पढ्दा मलाई के लाग्थ्यो भने म भन्दा राम्रो पढ्नेहरू धेरै छन् । उनीहरूसँग म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ । एक नम्बर त कहिल्यै हुन सक्दिनँ झैँ लाग्थ्यो । तर, मैले जीवन भोग्दै जाँदा त्यो १ नम्बरभन्दा बढी गरेँ। किनकि मैले सिप सिकेँ, आर्जन गर्न सिकेँ । स्वरोजगार बन्न सके“, अरूलाई रोजगार दिन सके“ । शिक्षा यस्तै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
शिक्षा भनेको आफूले आर्जन गर्न सक्ने, आफूलाई बचाउन सक्ने हुनुपर्छ । पिएचडी गरे पनि कहीँ केही गर्न नसक्ने शिक्षाको के अर्थ ?
एउटा गाउँको केटो पढ्दापढ्दै एसएलसी दिन काठमाडौँ आउँछ । उसले अनेक दुःख गरेर पढ्छ, लोकसेवामा लड्छ । एउटा कोठा लिएर सरकारी जागिर गर्छ । सुब्बा, खरिदार, उपसचिव गर्दै सचिव पनि हुन्छ । त्यसपछि सिद्धिन्छ । राष्ट्र सेवामा उसको ठूलो योगदान होला, तर शिक्षा भनेको त्यस्तो हुन पर्यो कि त्यसले अर्को २५ जनालाई रोजगार दिन सकोस् । त्यो खालको शिक्षाचाहिँ आज छैन नेपालमा । आफ्नो शैक्षिक अवधारणाले अरूलाई बचाउन सक्ने शिक्षा हुनुपर्छ ।
मैले प्रि–प्राइमरी तहको शिक्षा मोडल प्राइमरी स्कुलबाट लिएँ । नेपालमा दार्जिलिङका शिक्षकहरूले खोलेको यो पहिलो–दोस्रो स्कुल होला । त्यसपछि महेन्द्र आदर्श स्कुल हुँदै म ल्याब स्कुल पुगेँ । त्यही“बाटै मैले एसएलसी दिएँ । मच्छिन्द्र स्कुल मेरो एसएलसी सेन्टर थियो । त्यसपछि कमर्स पढ्न थालेँ । शंकरदेवबाट ब्याचलर अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमकम गरेर पढाइको क्रम रोकेँ ।
म एसएलसीमा अप्सनल म्याथमा २२ नम्बर ल्याएर फेल भएको मान्छे । रिटोटलिङ गराउँदा ३६ नम्बर ल्याएर पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण भएँ । त्यसबेला एसएलसी सेन्टरहरूमा कडाइ गरिन्थ्यो । ल्याब स्कुलबाट गएकालाई त्यसले खासै फरक पार्दैनथ्यो । मेरा साथीहरूलाई नेपाली गाह्रो हुन्थ्यो । म भने नेपालीमा ट्युसन लिने गर्थें । त्यसैले मलाई खासै त्यस्तो तनाव थिएन । समूह छलफल गर्दा एक–दुई घन्टा पढेपछि पुग्ने खालको थिएँ । म एकदमै गहिरो ढंगबाट नपढ्ने तर सामान्य ज्ञानको भरमा पास हुने खालको विद्यार्थी थिएँ । त्यतिबेला पनि चिट चोर्ने चलन थियो, तर मैले चाहिँ चोरिनँ । किनकि मलाई परीक्षा दिन जाँदै छु जस्तो कहिल्यै लागेन । परीक्षामा पूरा समय पनि बस्दिनथेँ । आफूलाई आएकोजति गरेर हिँडिहाल्थेँ । दायाँ–बायाँ कहिल्यै पनि गरिनँ । किनकि मलाई लाग्थ्यो, म ठीकै गर्छु, पास त हुन्छु । मलाई अभिभावकको दबाब पनि खासै थिएन । स्कुलमा पनि अतिरिक्त क्रियाकलापमा बढी सहभागी हुन्थेँ । सिनियर विद्यार्थीहरूसँग बढी हुन्थेँ । पढाइभन्दा अरू कुरामा बढी ध्यान दिने भएकाले पनि स्कुलले मबाट धेरै आशा राखेको थिएन । त्यही भएर फेल भएछ, ठीकै भयो भन्ने प्रतिक्रिया पनि आए । फेल भएको कुरा सुन्दाचाहिँ छक्क परेँ । फेलै त नहुनुपर्ने मान्छे म । ‘रिटोटलिङ’ पछि पास त भएँ, तर रिटोटलिङको दौरान एकदमै तनाव भयो । दिनदिनै रिटोटलिङ गर्ने सेन्टरमा जानुपर्थ्यो । बुबाले पनि धेरै प्रयास गर्नुभयो । करिब ६ महिनै लाग्यो ।
मसँग एसएलसीदेखिकै कुनै पनि सर्टिफिकेट छैन । कहिल्यै त्यसको जरुरत पनि परेन । म योभन्दा बढी गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । प्रमाणपत्र मात्रै जीवन जिउने मापदण्ड होइन । पढ्दै नपढेको मान्छेले पनि समाजमा उत्कृष्ट काम गरेको छ, पैसा मात्र होइन, नाम पनि कमाएको छ ।
अहिले अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयले बच्चाहरूलाई चौबीसै घन्टा स्कुलमा राखेर ‘कोच’ गरेको देख्दा एसएलसी त्यसरी दिलाउन पर्ने परीक्षा हो र भन्ने लाग्छ । मेरो शिक्षाको परिभाषा अलिक फरक छ । एसएलसी परीक्षा पास हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन । आफ्नो जीवनमा बाँच्नका लागि, जीवन अघि बढाउनका लागि, पढ्दै नपढी पनि धेरै ठूलो काम गर्नेहरू छन् नि । अब जागिर नै खाने हो भने चाहिँ डिग्री गर्नुपर्यो । ठीक छ, पढ्न पर्छ, एसएलसी पास हुन पर्छ । तर, सर्टिफिकेटकै लागि पढ्न पर्छ भन्ने मलाई कहिल्यै लागेन । मसँग एसएलसीदेखिकै कुनै पनि सर्टिफिकेट छैन । कहिल्यै त्यसको जरुरत पनि परेन । म योभन्दा बढी गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ । प्रमाणपत्र मात्रै जीवन जिउने मापदण्ड होइन । पढ्दै नपढेको मान्छेले पनि समाजमा उत्कृष्ट काम गरेको छ, पैसा मात्र होइन, नाम पनि कमाएको छ । शिक्षासँग प्रमाणपत्र मात्र आएर अरू कुरा आएन भने काम लाग्दैन । प्रमाणपत्र चाहिँदैन भनेको होइन, तर संस्कार, सामाजिक मूल्य र मान्यता पनि सँगसँगै आउन पर्यो ।
आधारभूत तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको प्रशिक्षण सुरू